महिलाहरु पुरुषका यी ५ कुराबाट टाढा भाग्छन्, अहिले नै गर्नुहोस् परिवर्तन
अगस्ट 14, 2019 अगस्ट 14, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments पुरुष, महिला
कतिपय पुरुषको बानी महिलाहरुलाई मन पर्दैन भने महिलाका केहि बानी पुरुषलाई मन पर्दैन । यदि तपाईं पनि कुनै महिलालाई प्रपोज गर्ने सोच बनाई रहनु भएको छ र चाँडै नै ती महिलाको मन जित्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिले यो लेख पढ्नुहोस् । कुनै पनि महिलालाई प्रपोज गर्नुभन्दा पहिले उनलाई कस्ता पुरुष मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ ।
पुरुषमा फ्लर्ट गर्ने बानी सामान्य हुन्छ । यस्ता पुरुष जोसुकै महिलालाई देखेर उनीहरुसँग फ्लर्ट गर्न सुरु गर्छन् । यस्ता पुरुषबाट पनि महिला टाढा हुन्छन् ।
पुरुषहरु आफ्ना प्रेमिकाप्रति निकै पोजेसिव भएको हामीले देखेका छौं । प्रेमिका कहिले कतिबजे कहाँ गइरहेका छन् उनीहरुलाई हरेक कुराको जानकारी चाहिन्छ । यस्ता प्रतिबन्ध लगाउने पुरुष पनि महिलालाई मन पर्दैन ।
४. पुरुष मित्रसँग ईष्र्या गर्ने पुरुष
५. केयर नगर्ने पुरुष
← नाइटोमा नरिवलको तेल लगाउदा हुने फाइदाहरु
आफ्नो कोहि छ भनेर यहाँ नपरौं भर्ममा ? →
2 thoughts on “महिलाहरु पुरुषका यी ५ कुराबाट टाढा भाग्छन्”